धुर्मुसलाई ठुलो झ’ड्का रेणु दाहाललाई खुशी बनाउन वृद्ध, बच्चा र कै’दी बन्दीसँग पैसा उठाउन ला’ज लाग्दैन ? (भिडियो सहित)
Homeसमाचारधुर्मुसलाई ठुलो झ’ड्का रेणु दाहाललाई खुशी बनाउन वृद्ध, बच्चा र कै’दी बन्दीसँग पैसा उठाउन ला’ज लाग्दैन ? (भिडियो सहित)
April 3, 2021 admin समाचार 5761
धुर्मुस सुन्तली फाउ’न्डेसनको ड्रिम प्रोजेक्ट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रगंशालाको यतिखेर ३० प्रतिशत निर्माण सम्प’न्न भइसकेको छ । तर उक्त रगंशाला पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि भने आर्थिक समस्या पर्ने देखिएको छ । जसकारण रगंशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची-महाकाली अभियान थालि’एको छ ।
यो अभि’यानका अभियान्ताहरू नेपालका प्रत्येक जिल्ला पुग्ने छन् भने त्यहाँ दुईदिन बिताएर, रगंशालाको बारेका जा’नकारी गराउने छन् । उक्त अभिनयानमा सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), अर्जुन घिमिरे (पाँडे) , सामाजिक अभियान्ता अर्जुन भुषाल लगाय’तका व्यक्तिहरू रहेन छन् ।
उक्त टोलीलाई, सोम’बार बिहान रगंशालाकै मजदुरहरूले टीका र माला लगाई चार हजार चारसय पाँच रुपैयाँ सह’योग गरेर बिदाई गरेका छन् । धुर्मुसको यही अभियानलाई लिएर तारा बारालले त्यहाँ रङशाला बनाउनु हाम्रो देशको लागी हित छैन भनेर बोल्दै आ’एकी छिन । इताजा खबरबाट
हेरौ उनको बिचार भिडियोमा:
March 27, 2021 admin समाचार 5118
शुक्रबार साँझ नि’धन भएका कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई लोकप्रिय र नि’ष्ठावान नेताका रुपमा स्म’रण गरिएको छ । २०७३ साल भदौं १० गते उद्योगमन्त्रीको रुपमा पद बहा’ली गरेपछि छोटो समयमा उल्लेखनीय उपलब्धीहरु हाँसिल गरेपछि उनी निकै
June 5, 2021 admin समाचार 4416
जमिन मुनिको मानिस पनि पत्ता लगाउन सक्ने, प्रहरीको कुकुर लिएर बम्जनको कोठामै पुग्दा जे दे’खियो (हे’र्नुहोस् भिडियो)
April 30, 2021 admin समाचार 5208
गत असार ४ गते बिहान ४ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ स्थित जंगल क्षेत्र प्रहरीले घे’रा हा’ल्यो। कर’णीको आ’रोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई प’क्राउ गर्ने प्रहरीको यो दोस्रो अप्रे’सन थियो। क’रणीको आ’रोपमा उनकै अनुयायीले सर्लाही जिल्ला